ဆီးချိုရှိသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးသောအစားအစာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ... - Hello Sayarwon
ဆီးချိုရှိသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးသောအစားအစာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ...
ဆီးချိုရောဂါက ကမ္ဘာ့လူဦးရေတွေကို ခြိမ်းခြောက်လာနေတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာကြီးတစ်ရပ်ပါ။ ဒီရောဂါက သူတင် ခန္ဓါကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားနောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေကိုပါ ခေါ်လာပြီး ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတာပါ။ ဆီးချိုကြောင့်ကျန်းမာစေဖို့နဲ့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေ ဝင်မလာစေဖို့ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် စားသုံးဖို့လိုပါမယ်။
ဆီးချိုဖြစ်လာရင် အချိုလျှော့စားရုံနဲ့ အဆင်ပြေပြီလား….
လူတော်တော်များများယူဆလက်ခံထားတာက ဆီးချိုဖြစ်ရတာက အချိုစားများတာကြောင့်လို့ပေါ့။ တကယ်ကတော့ ဆီးချိုကိုဖြစ်စေတာက အချိုအစားများတာ တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ သွေးတွင်းအဆီဓါတ်များတာ၊ ခန္ဓါကိုယ်က အင်ဆူလင်ကို ကောင်းကောင်းမတုံ့ပြန်တာ၊ ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက်များနေတာ၊ မျိုးရိုးရှိတာ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းတာ၊ အချိုကဲ အငန်ကဲတဲ့အစားအစာတွေကို အလွန်အကျွံစားသုံးတာတွေကြောင့်လည်း ဆီးချိုရောဂါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုဖြစ်ရင် မဖြစ်မနေဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချက်တစ်ချက်
ဆီးချိုရှိသူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာနေစေဖို့ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေဂရုစိုက်ရမယ့် အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားသုံးပေးဖို့ပါ။ ဒီတော့ ဆီးချိုရှိသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ကျန်းမာနေစေဖို့ ဘာတွေစားမလဲ….
အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ – အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်နေသလို ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေလည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင် နေပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေမှာပါ။
ပဲအမျိုးမျိုး – အမျှင်ဓါတ် နဲ့ ပရိုတင်း (အသားဓါတ်) ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်နဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆယ်လ်မွန် – ပရိုတင်း (အသားဓါတ်) နဲ့ Omega -3 fatty acid ပါဝင်နေတာကြောင့် ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဆီထုတ် ဒိန်ချဉ် – ဗီတာမင် D ကြွယ်ဝတာကြောင့် အရိုးတွေသန်မာစေနိုင်ပြီး သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
အဆီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အသား – ပရိုတင်း (အသားဓါတ်) ကြွယ်ဝစွာရရှိပြီး ခန္ဓါကိုယ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်မှာပါ။
Oatmeal – ပျော်ဝင်လွယ်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်နေတာကြောင့် အင်ဆူလင်တုံ့ပြန်မှုကိုကောင်းစေပြီး သွေးတွင်းသကြား ဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးနို င်ပါတယ်။
အခွံမာသီး – အကျိုးပြုအဆီတွေပါဝင်နေတာကြောင့် နှလုံးကျန်းမာစေနိုင်ပြီး သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့ အစားအစာတွေကို သင့်တင့်အောင်စားသုံးပေးတာအပြင် နေ့စဉ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တာ၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်တာနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြေလျော့တာတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီးချိုရှိနေပေမယ့် နေ့ရက်တိုင်းကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် စားသောက်နေထိုင်ကြပါလို့ အကြံပြုပါရစေနော်။
Type2Diabetes Causes and Risk Factors https://www.webmd.com/diabetes/diabetes-causes#2 Accessed Date 27 September 2019
Top 10 Diabetes Superfoods https://www.healthline.com/health/type-2-diabetes/ten-diabetes-super-foods Accessed Date 27 September 2019